Syncari: Unganidza uye Gadzirisa Dhata-Rinoshanda Dhata, Gadzirisa Yekufashukira Kubasa Uye Govera Yakavimbika Insights Kwese Kwese. | Martech Zone
Makambani ari kunyura mune dhata iyo inoungana muCRM yavo, kushambadzira otomatiki, ERP, uye mamwe makore data sosi. Kana zvikwata zvakakosha zvekushanda zvisingakwanise kubvumirana kuti ndeipi data inomiririra chokwadi, mashandiro acho anomiswa uye zvinangwa zvemari zvinonetsa kuwana. Syncari inoda kuita kuti hupenyu huve nyore kune vanhu vanoshanda mairi kushambadzira ops, kutengesa ops, uye kwemari ops vanogara vachinetseka nedhata vachipinda munzira yekuzadzisa zvinangwa zvavo.
Syncari inotora nzira nyowani yekubatanidza, otomatiki, uye manejimendi yedata. Yadzo yakazara data chikuva inobatanidza, zvibodzwa, uye inochenesa data kubva kune ako ese epamusoro masystem. Kusiyana neWorkato kana MuleSoft, Syncari inopa isina-dhata manejimendi manejimendi mabasa kubatsira mahunyanzvi nyanzvi kuita michina nedata ravanovimba. Iyo dhata manejimendi manejimendi inozogovera iyo yakavimbika dhata uye maonero kumashure kune ese dhipatimendi tsime rechokwadi uye chengetedza masystem aya achienderana pamwe chete sezvo nani data rinobuda. Izvi zvinonunura zvikwata zvako kubva pamutoro wekuongorora dhata remanyore uye kuchenesa nekuisa pakati nekugadzirisa data rekuvandudza, kurongedza, uye kudzokorora.
Syncari inzira irinani yekuvandudza bhizinesi dhata. Iyo inosanganisa zvakasarudzika kugona kweFiveTran, imba yekuchengetera data (semuenzaniso Snowflake), uye Census / Hightouch mune imwechete chikuva kuti zvinyatso kurerutsa kusangana-kumagumo. Syncari yakasanganisa kusanganisa, otomatiki, uye manejimendi yedata mune imwe yakazara chikuva kupa simba kune wese munhu kuti akunde nyonganiso iyi nekutora dhata-yekutanga nzira.
Syncari Data Management Platform Inopa:
Yakabatana data modhi - Sisitimu yega yega inotsanangura vatengi neimwe nzira yakati siyanei. Isu takagadzirisa izvi kwauri, saka masisitimu ako anogona kutaura mutauro mumwe chete.
Multi-inotungamirwa sync - Chengetedza data rekuyambuka-rakabatana neyedu patent-yakamirira transactional injini iyo inochengetedza nyika uye inotonga dhata pane yega yega yakabatana system otomatiki.
Zvoga schema manejimendi - Kana minda mitsva ikawedzerwa kana kubviswa kune chero dhata sosi, Syncari inogadziridza yega maitiro akanganisa. Kuva wakanaka kuputsa shanduko!
Yakagoverwa manejimendi manejimendi - Automation uye maratidziro e data akagadzirwa muSyncari anowirirana neese dhata sosi yakabatana kune yakabatana data modhi, ichigonesa isina kumboitika data kuenderana.
Kusiyana nechinyakare zvabatanidza, Syncari Synapses anonzwisisa zvakadzama magumo masystem, anopa zvakadzama kusangana kune mamwe mashandiro senge kubatanidza uye zvakapfava-kudzima, uye kugadzirisa zvinoitika zve schema shanduko pane ese akabatana Synapse. Raibhurari yavo yekubatanidzwa inosanganisira Airtable, Amazon S3, Amazon Redshift, Amzon Kinesis, Amplitude, Drift, Eloqua, Intercom, Microsoft Dynamics 365, Freshworks CRM, Gainsight, Google BigQuery, Google Sheets, Hubspot, Jira, Marketo, Mixpanel, MySQL, NetSuite , Outreach, Salesforce Pardot, Pendo, PostgreSQL, Salesforce CRM, Sage Intactt, SalesLoft, Snowflake, Workday, Xero, Zendesk, uye Zuoro.
Kumbira Demo reSyncari
Tags: Amazon Redshiftamazon s3amplitudeAmzon Kinesiskushandisa michinakuverenga vanhuisina kodhikopi isina kubatanadata kushandisa michinakubatanidzwa kwedataData managementdhata manejimendi manejimendideta rekuchengetaDragora uye udonesedhonza uye udonhedze kusanganavasakukurwaeloquaEnterprisedata rebhizinesiMashonalandZvitsva CRMkuonaGoogle BigQueryGoogle SheetsitihightouchhubspotkusanganaIntercomJiragadzirisa datamarketomicrosoft dynamics 365MixpanelmysqlnetsuiteoutreachPendoPostgreSQLSage Yakasimbavatengesi crmmutengesi pardotSalesLoftSnowflaketsime rechokwadirokushandaXerozendeskZuora
May 13, 2021 pa 3: 03 PM
Ndatenda nekutifukidza. Izvi zvakanyatsonyorwa! Zvakawanda zvinokosheswa uye kana ini ndichigona kukubatsira munzira ipi neipi, usazeze kusvika.
May 14, 2021 pa 4: 25 PM
Kutenda nekatsamba, Nick! Kutarisira kumberi kupatsanura zvakadzika - ini ndanga ndatotumira imwe info kune vamwe vanobatana.